Art iWiricheya Shamwari kune avo vane hanya
Unyanzvi uye Maitiro Aungaita Kuti Ubatanidzwe
Kune nzira dzakawanda munhu dzaanogona kukoshesa hunyanzvi uye dzakasiyana mafomu. Kana iwe waenda kune yemuseum museum ipapo iwe unozoziva kuti runako sei runogona kuve. Chikamu chakanakisa chehunyanzvi ndechekuti chero munhu anogona kutora chikamu kunyangwe iwe uchizove uri wiricheya akasungwa. Kune mamuseum mumunyika uye mazhinji acho ari wiricheya inoshamwaridzika saka munhu wese anokoshesa hunyanzvi hwahwo. Kana iwe uchida kuve muimbi ipapo iwe ungazobvuma kuti hunyanzvi inzira yekugadzira yekuzviratidza iwe. Kubatanidzwa mune hunyanzvi kunogona zvakare kuve rudzi rwekuzvivaraidza nekuti unogona kutanga kuve muimbi pamwe nekugara uchishanyira mamiziyamu akasiyana. Sezvo chipingamupinyi chekutora chikamu chiri pasi iwe unogona kuita kuti shamwari dzako chibatanidzwe mazviri zvakare.
Muchikamu chino, isu tichatsanangura nzira dzakasiyana dzaunogona kutanga kubatanidzwa neunyanzvi. Sezvo isu tisingapinde mune huru ruzivo iwe unowana ma link kune zvimwe zvinyorwa zvine rumwe ruzivo rwakadzama pane chaiwo maratidziro. Google inogona zvakare kushanda seshamwari yako yepamwoyo kana iwe uchida ruzivo rwakadzama pane chero chinhu, kwete zvinyorwa zveunyanzvi chete.
Iwe Unoda Degree Kuti Utange?
Mhinduro pfupi iri kwete nekuti chichava chinhu chinonakidza. Kana iwe uchida kuishandura kuita zvinopfuura zvekutandadza saka aizove akangwara kuti uwane degree kunyangwe zvisiri zvakafanira. Zvese zvauri kunyatsoda zvishoma zvekugadzira uye kuda. Iwe haufanire kutanga kupenda uye kudhirowa. Unogona chete kutanga kuenda kumuseum mamyuziyamu uye kuita kuti kuda kwako kutange kwehunyanzvi.
Kune iyo nzira yaunoshuvira kusave muimbi saka unogona GOOGLE mamuseum padyo newe wotangira ipapo. Iva nechokwadi chekuti unoziva nguva yavanovhara uye nguva yavanovhura. Chimwe chinhu chekufunga nezvacho ndechekuti vari kuwirirana nemawiricheya. Ndizvo zvingava zvakanyanya pfungwa dzakakosha chinyorwa chekuchengeta kana iwe uchitsvaga dzakasiyana sarudzo. Vamwe vavo zvakare vakatungamira mafambiro e remara vanhu uye kushanya mune zvakajairika zvese zvinoenderana neyaunosarudza kuenda.
Kana iwe uchida kuve muartist asi nenzira yekuvaraidza saka haudi izvo zvakawanda zvinhu. Kuenda kumamiziyamu kuchakukurudzira kuti uedze zvinhu zvakasiyana. Kuitarisa kumusoro pamhepo zvakare asi kuchiona iwe pachako kuchanyatsobudirira sezvo uine munhu-wekuonana naye. Pano isu tinosanganisira runyorwa rweakasiyana ekutanga zvinhu ungangoda kufunga mune yako ichangobva kuwanikwa rwendo rwekuva muimbi.
1. Kudhirowa Mapenzura Wekumusoro Quality
3. Dhirowa Matenga
4. Vakasiyana maEraser
5. Yakanyanya Yakanaka Penzura Sharpener
6. Marasha kana Conte
7. Akanzwa Tip Pen
8. Kubatanidza Stumps